Waxgaradka reer Gaalkacyo, oo geeri sugayaal noqday.
July 31, 2012 - Written by Nairobi:-Waxaa magaalada Gaalkaco caadi ka noqday dilal joogto ah, kuwaas oo lala beegsanayo; cuqaasha, isimada, culimada, siyaasiyiinta, ganacsatada, saraakiisa sar-sare iyo cid alle ciddii lagu tuhmo in ay ummadda wax u tari karto.
Dadka ku nool magaalada Gaalkacyo gaar ahaanna waxgaradka ayaa ahaa mayti socota, iyadoo dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxgarad badan lagu laayey magaalada. Dadka la laayo ayaan ilaa hadda loo hayn wax raad ah.
Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Gaalkacyo oo aan saaka siyaabo kala duwan ula xiriirnay ayaa ka gaabsaday jawaabo maaddaama ay xaaladdu u muuqato ” afkiibaa juuqda gabay”, waxaana dareenkooda laga dheehanayey inay aad uga xun yihiin falalka leynta waxgaradka reer Gaalkacyo.
Xalay ayey aheyd markii xaafadda Israac ee magaalada Gaalkacyo, lagu toogtay Allaha u naxariistee Nabadoon Col. C/laahi Farey iyo Cismaan Maxamed Xasan oo ay wada dhasheen.